बालुवाटर आाउने ओलिकाे निम्ता प्रचण्डद्वारा अश्विकार – Paluwa Khabar
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रबार 29
काठमाडौं कात्तिक १४ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटवार्ताका लागि राखेको प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन् । छलफलका लागि बालुवाटार आउन प्रचण्डलाई ओलीले तीन दिनदेखि आग्रह गरिरहेका छन् ।
विहीबार बिहान लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । पोखरेलले दुई अध्यक्षवीचको सम्वादहीनता तोड्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए । पोखरेल खुमलटार पुगेकै बेला बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर ‘आउनोस् छलफल गरौं’ भनेका थिए ।
प्रचण्डसँग सम्वाद हुन नसकिरहेका बेला मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भने लामो छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र पूर्वमाओवादी समूहसँगको गुनासो पोख्दै माधव नेपाललाई मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश लिएर खुमलटार पुगेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रचण्डले अहिले बालुवाटार नजाने जवाफ दिएको स्रोतले जनायो । जनार्दन शर्मालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको र शर्मासँग आफ्नो पनि उठबस भएकाले केही दिनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु स्वास्थ्यको हिसाबले उपयुक्त हुने प्रचण्डले जवाफ दिएको स्रोतले बतायो ।
ओली–प्रचण्डबीच नौ दिनयता सम्वाद हुन सकेको छैन । गत कात्तिक ४ मा ओली र प्रचण्डबीच निकै लामो सम्वाद भएको थियो । कर्णाली प्रदेशको विवाद हल गर्न भएको छलफलबारे ओली र प्रचण्डका तर्फबाट छुट्टा–छुट्टै प्रेस नोट जारी भएयता सम्वाद रोकिएको छ ।
दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिविपरीत ओलीले निर्णय लिने गरेको भन्दै रिसाएका प्रचण्डले बालुवाटार जाने प्रस्ताव कोरोनाको बाहना बनाएर अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
प्रचण्डसँग सम्वाद हुन नसकिरहेका बेला मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भने लामो छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र पूर्वमाओवादी समूहसँगको गुनासो पोख्दै माधव नेपाललाई मिलेर अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए । आफू मिलेर जान खोज्दा पनि कार्यकारी अध्यक्षकै कारण समस्या उत्पन्न भइरहेको प्रधानमन्त्रीले नेता नेपालसँग गुनासो गरेको स्रोतले बतायो ।
ओली र प्रचण्डबीचको सम्वादहीनताकै वीचमा कात्तिक १५ देखि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत एक महिना पछि सरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक दुई महिनापछि सार्ने बालुवाटारको प्रस्ताव बोकेर महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बुधबार खुमलटार पुगेका थिए । तर, प्रचण्डले बैठक दुई महिनापछि सार्न उपयुक्त नहुने भनेपछि फर्केका महासचिव पौडेलले अर्का अध्यक्षलाई भेटेपछि बैठक एक महिनापछि (मंसिर १५ गते बस्ने गरी सरेको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो ।
गत भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले कात्तिक १५ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर चैतमा तोकिएको एकताको महाधिवेशनबारे तयारी थाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ओली–प्रचण्ड बीचको मतभेदकै कारण स्थायी कमिटी बैठकले गरेको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अध्यक्षद्वयको सम्वादहीनताकै वीचमा कात्तिक १५ मा बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक मंसिर १५ मा सारिएको छ । साभार अनलाईन खवर
Prevघरज्वाई बस्ने केटाको खोजिमा चर्चित गायिका ज्योति मगर ….
Nextप्रधानमन्त्रि ओेलिकाे ब्रिफिङ-माेदिले दुत पठाउछु भन्थे सामन्त पाे अाएछन
देशको चिता नजलोस् -भीम उपाध्याय
कोरोना भाइरसको चीनमा देखिएको यो तथ्यले विश्वभरी अर्को त्रास बढ्यो !
विनयजंग बस्नेत ५० हजार ध’रौटीमा छुटे